Unofanira Sei Kutengesa Pamhepo | Martech Zone
Ecommerce saiti anotevera, achipa kunze kwebhokisi software senge mapuratifomu ebasa ane kumisidzana kwakasimba kwazvo - mazhinji ane mubhadharo pakubatanidzira kwekukwikwidza uye kushambadzira neemail. Kana iwe uchida zvimwe kutonga pamusoro pekumhanyisa, kuchinjika uye kugadzirisa, kuitisa yako wega ecommerce saiti inogona kunge iri mhinduro. Uye kana iwe uchida kuvaka yako, iwe unongova nzungu.
Heino inonakidza uye nehunyanzvi infographic inoongorora nzira dzakasiyana siyana dzekutengesa pane arizvino masosi epamhepo.
Source:CPC Strategic Blog
Tags: ecommercevakatengesa muIndaneti
Andrew ndiye director weCPC Strategy yekutengesa. Mukupera kwaSeptember 2010, Andrew akapedza kunyora yekutanga Merchant Comparison Shopping Handbook iyo inopa muongororwo wakazara wemaitiro ekutanga uye kugadzirisa mushandirapamwe wekuenzanisa wekutengesa. Nhasi Andrew anoshandisa yakawanda yenguva yake kubvunza vepakati nepakakura vatengesi vepamhepo uye epamhepo ekushambadzira masangano, uye zvakare kunyora nekutungamira iyo CPC Strategic Blog.
Wedzera Icon Yekumba kune iyo WordPress Navigation Menyu
Iwe waigona sei kupotsa "Olx" mune iyi infographic:/
Ndakatora nguva yakati rebei ndichipfuura nekuyerera chati kweiyi infographic. Ndakaona zvichinakidza uye, muchokwadi, panzvimbo - chaizvo. Iye munhu akagadzira iyi infographic ane ruzivo rwekutengesa zvinhu online.